Ihe na-eme On Long Train Journeys | Save A Train
Home > Travel Europe > Ihe na-eme On Long Train Journeys
(Emelitere ikpeazụ On: 19/02/2021)
A ụgbọ okporo ígwè -amanye anyị kwụsịtụ, ele anya si na windo na-enwe ekele maka okomoko nke na-ewere oge anyị. Ejegharị ejegharị bụ na-akpali akpali ma ike mgbe ụfọdụ weghara anyị niile ume, a ogologo ụgbọ okporo ígwè njem bụ a ohere ka ịgbanwee anya na tụsaratụ. Mee ọtụtụ ihe gị na njem - ebe a bụ anyị n'elu ihe na-eme na ogologo ụgbọ oloko njem na-ekwe nkwa ọ bụla njem a izuike na-atọ ụtọ na-agba ịnyịnya.
Gee egwu mgbe na-ewere a ogologo oge ụgbọ okporo ígwè Journeys
Na-etinye na gị ekweisi na akwụsịlata mgbe na-ege ntị ọkacha mmasị gị music. E nweghị ụzọ ka mma isi na-enweta ọmarịcha mma. Zuru ike na-ekiri ndị mara mma odida obodo rosh gara aga ka ị na-ege ntị kachasị amasị gị.
Ịmụta asụsụ ọhụrụ
Gịnị mere adịghị ịzụlite a ọhụrụ nkà gị njem? Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na-a obodo na-ekwu okwu a dị iche iche asụsụ, a ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem na-enye ohere na-bulie a okwu ole na ole na nkebi ahịrịokwu.
Ọ dị mma ịmara ihe ndị bụ isi nke ọ bụla asụsụ mgbe ịga mba ọzọ. Luckily, enwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na pọdkastị ị nwere ike ibudata na-enye ọmụmụ gụnyere na-ewu ewu Spanish, German, Italian, na English asụsụ.
Reading dị ukwuu n'ihi na izuike na bụ mgbe a obi ụtọ ụzọ ruo oge. Long ọrụ ya na-ejikarị ọrụ n'aka nwere ike pụtara obere oge maka ịgụ, otú a ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem na-anọchi anya ohere na-awụlikwa elu n'ime gị akwụkwọ ma ọ bụ ebook. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta umengwụ na chọrọ a na-eme na-agụ gị, ọdịyo-akwụkwọ a oké ọzọ.
na laptọọpụ, iPads, na smartphones i nwere, ọ dị mfe chọta ntụrụndụ onboard. Ịchụkwudo gị ọkacha mmasị telivishọn usoro ma ọ bụ na-ekiri na ihe nkiri na ị nọwo na-agụ na-ekiri.
Ma e nwere WiFi dị ma ọ bụ na, ọ bụ ezi echiche iji ibudata ọ bụla show ma ọ bụ nkiri ị na-eme atụmatụ na-ekiri tupu gị na njem. Ịchụkwudo gị ukwuu-hụrụ n'anya na ihuenyo akụkọ na n'iru ị maara ya, ị ga-abụ na ị na-aga.
Gaa Leta kantiin
Ọ dị mfe iji na-eche na ike gwụrụ dị umengwụ n'oge a ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem. Mgbe ọdụ na a ụgbọ okporo ígwè ruo ọtụtụ awa, ọ dị mkpa iji gbatịa gị ụkwụ mgbe o kwere omume. A obere ije na kantiin ga-enyere gị aka iji oge na iche na recharged. Walkthrough na carriages na kantiin, anya na odida obodo na-enwe ụfọdụ eji megharịa ọnụ na a onunu gị oke
Izute ọhụrụ ndị na ogologo ụgbọ oloko Journeys
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ a na-elekọta mmadụ na ahụmahụ. Ihe ọhụrụ ndị mmadụ na ụgbọ oloko bụ mfe karịa ndị ọzọ ụdịdị nke iga. N'adịghị ka a ụgbọelu, i nwere nnwere onwe na-akpali gburugburu na-arụ na ndị njem ndị ọzọ. Ọ bụ-adọrọ mmasị ihe ị pụrụ ịmụta site n'aka ndị ọzọ na ha akụkọ – ekwu okwu banyere ndụ, ọrụ, ma too netwọkụ gị. Ask the person next to you about the book they’re reading, -enye ha a ụtọ, ma ọ bụ nanị ịmalite mkparịta ụka banyere ebe na ha na-ejegharị ejegharị na-. Ọ na-agafe mkparịta ụka gị mgbe ejegharị ejegharị Europe ụgbọ okporo ígwè na-emepụta na-adịgide adịgide na-echeta.
Kwadebe maka gị ọzọ ogologo ụgbọ okporo ígwè Journeys
The ogologo ụgbọ okporo ígwè njem bụ mgbe ụfọdụ naanị oge udo mgbe gị njem. O nwere ike ịbụ a mma ohere maka gị gbanye mmanu na kwadebe maka gị họọrọ ebe. ọṅụṅụ ọtụtụ mmiri, rie nri, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ụra. Iji gị ogologo ụgbọ okporo ígwè na njem na-eji amamihe ga-enyere gị na-eche nweta ume ma nyere - njikere maka gị ọzọ ebe.
Gịnị ka ị na-eme n'oge ogologo ụgbọ okporo ígwè njem? Ka anyị mara site tweeting anyị na @SaveATrain! , Ị nwere ike ịchọta anyị na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na ọwa na Saveatrain
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / es ka / ya ma ọ bụ / nl na ndị ọzọ asụsụ.
Business Travel site Train, Atụmatụ njem Eco, Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ Ndụmọdụ
Zụọnụ Travel China, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Travel Europe, Njem USA